Imifanekiso ye-Griffins ye-pornography: iinjongo zesondo zoLois
Iifrikhi ze-comics zobudlova
Ndakwazi ukwenza ingxolo kwi-intanethi ii Griffins zoononopopayi, i-parody yendalo yokuqala eyenziwe ngabaqeqeshi. Ixesha lefilimu eyaziwayo likhukula i-intanethi. Imbali yesahluko: UPetros, umfazi othobelayo: ULois, unyana othobileyo oselula: UChris, intombi eyaziwayo: Meg, inomdla ngecebo lezesondo.
eyona > Гриффины
I-hentai yeCattoon ibonisa ubomi bentsapho bentsapho, ukukhetha kwabo ngokwesondo - kugcinwe imfihlo. Intsapho yentsapho yatshintsha-yathatha isondo kwintloko kaLois noPetros, uChris wayemthanda ukutshiza unina kwilungu elityumbileyo, engamvumeli uyise ukuba ahlambe unina, uzalise umlenze kunye nesidoda. Indoda ekhulile yathintela ingqwalasela ngokugqithiseleyo kwicala lendoda.
Jonga iibhotole kubantu abadala
Ubomi bemihla ngemihla ngokuqinisekileyo kufuneka buhluke! Kusebenza kakuhle xa uqala ukubuka iipatto zabantu abadala. Abalingani abathandayo benza imimangaliso kwibhedi lomthando, ingcamango emangalisa ngokubonelela ngamandla. UFrank ucela uncedo lokuphumla, ulungiselele ubusuku obuhle.
Iimpawu ezinkulu kwi-cartoon filing
Jonga umzobo omdala ngaphandle kokucelwa
Iiphotole kubantu abadala abangatshatanga
Umama olungele kakuhle wentsapho yaseLois - efihle iminqweno yabo engqinileyo yokujonga amehlo. UPetros utshintshe indoda yakhe? - Iinkcukacha zekhathuni kubantu abadala ziya kunika iimpendulo kwimicimbi evelayo yobomi bentsapho iGriffin.
I-atmospheric yaguqulwa ngokugqithiseleyo kwindlela engokwemvelo, ibhinqa likhethe ikhukhamba enkulu, amandla. Umntu okhutheleyo we-nkampani, weza kusebenza, ehlala kude kubekho umnxeba, akhumbule indlu ngeengcamango. I-cartoon friffins idityaniswa kakhulu, ubuchule kunye nendlela yokusebenza kweengcali zizinga lokuqala. Ngobusuku ihlabathi libuya emsebenzini, ukukhanya kwekamelo lokutshisa, isandi sebhedi sagubha - susa, sagqiba ukugubha nokubona, sibone isityalo esincinane, sijonge kwaye sizimisele ukujoyina. Wayejonge njengoko umfazi eshaya i-sperm kwaye eyanandipha, iindawo eziyinkimbinkimbi zatshintsha, zenze i-bants, zikhuni zibukele iindaba.